Indra waxay soo bandhigeysaa codsi awood u leh baaritaanka iyo xakamaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Qalabka bilaashka ah
Indra waxay soo bandhigeysaa codsi awood u leh baaritaanka iyo xakameynta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Haddii ay dhacdo inaadan aqoon, taas kuu sheeg Indra waa mid ka mid ah jaaliyadaha Isbaanishka badan ee la xiriira adduunka horumarinta softiweerka iyo la talinta ugu muhiimsan ee heerka Yurub. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, ma aha wax adag in la fahmo inay go'aansadeen inay galaan adduunka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyagoo soo jeedinaya xalalka qaarkood, kiiskan la xiriira adduunka amniga.
Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan kaala hadlo nidaamka garaadka ee ARMS, Nidaamka Multisensor Anti RPAS, oo ay soo saareen injineerada Indra, madal loo diyaariyey in lagu ogaado nooc kasta oo diyaarad duuliye ah iyada oo loo marayo a radar oo u jirta masaafo dhawr kiiloo mitir ah. Marka la ogaado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, barxadda ayaa isbeddelaysa gobolka waxayna kicineysaa a Ka-hortagga soo noqnoqda ee kooxo kala duwan joojinta calaamadaha qalabka dhul-goosadka ee drone-ka iyo sidoo kale xiriirkiisa xiriir ee kontoroolka.
Indra waxay tijaabisaa softiweer awood u leh helitaanka iyo la wareegida maamulka diyaarad Drone ah.
Shaki la'aan, waa in la aqoonsadaa in shirkadda Indra ay si aad ah u sharadaynayso waaxda diyaaradaha iyo isgaarsiinta, tiknoolajiyad aad u casrisan oo dhibaato weyn ku haysa adduunka oo dhan, gaar ahaan, sidaan horayba u aragnay munaasabad, marka aad diyaarad aan duuliye lahayn gelay Hawada xaddidanAma in la waxyeeleeyo ama si toos ah ay sabab u tahay warbixin khaldan ee kontoroolaha, ficil sababi kara waxyeelo weyn iyo xitaa milyaneer khasaara ah oo loo geysto jilayaasha hawadan.
Waqtigan xaadirka ah, sida la xaqiijiyay, nidaamkani wali wuxuu ku jiraa wajiga horumarka maaddaama shirkadaha caalamiga ah ee Isbaanishka ay wali wadaan tijaabooyin si loo gaaro saxnaanta ugu badan markay timaaddo barxadda si loo ogaado, loo kala saaro loona raaco nooc kasta oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ee isku xiraya isticmaalka. sawirka kuleylka iyo dhageysiga raadiyaha. Mid labaad Evolution waxay u oggolaan doontaa nidaamka ARMS gacanta ku dhig diyaaradda isla markaana ku hagaaji aag ammaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Indra waxay soo bandhigeysaa codsi awood u leh baaritaanka iyo xakameynta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
CIA-da ayaa awood u yeelan doonta inay fuliso weerarada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn mahadnaq ay u hayaan Maamulka Trump
Abuur nidaam muusig soo dhaweyn leh Raspberry Pi